बागलुङ काँडेबासका डा. हिमाल कँडेल अस्ट्रेलियाको फिलिन्डर्स युनिभर्सिटीबाट सम्मानित ! – ebaglung.com
२०७६ जेष्ठ ९, बिहीबार १४:२३	Top News, अन्य समाचार, थप समाचार
अस्ट्रेलिया २०७५ जेठ ९ । बागलुङ जिल्ला गल्कोट नगरपालिका काँडेबासका डा. हिमाल कँडेल अस्ट्रेलियाको फिलिन्डर्स युनिभर्सिटीमाबाट प्रतिष्ठित ‘भाइस च्यान्सलर अवार्ड फर डाक्टरल थेसिस एक्सिलेन्स’ बाट सम्मानित भएका छन् ।
विश्वबिद्यालयका कुलपति स्टेफेन गर्लाकले हालै सम्पन्न दीक्षान्त समारोहमा कँडेललाई गोल्ड मेडल प्रदान गरेका हुन। हरेक वर्ष विश्वविद्यालयले बिद्यार्थीले गरेको अनुसन्धानको आधारमा उत्कृष्ट बिद्यार्थीलाई बिद्याबारिधि प्रदान गर्ने गर्दछ। कँडेलले आँखाको रोगले जीवन गुणस्तरमा पार्ने असरको परेमा अस्ट्रेलिया र नेपालमा अनुसन्धान गरेका थिए।
केहि महिना अगाडी कंडेलले साउथ अस्ट्रेलियाको गभर्नर सम्मानित ु हिउ भान लिू बाट अन्तर्राष्ट्रिय बिद्यार्थी अवार्ड २०१८ सहित दुई पुरस्कारबाट समेत सम्मानित भएका थिए। हाल कँडेल युनिभर्सिटी अफ सिड्नी अन्तर्गत त्यहिँको आँखा अस्पतालमा पोस्ट डक्टरल रिसर्चरको रुपमा कार्यरत छन।
वर्षा संगै गौदी खोलामा आएको भीषण बाढीले बजिनी, निग्राह पुल्चोक बस्ती जोखिममा !